ရည်မှန်းချက်ကြီးကြီးထားပါ! ဒူဘိုင်း Dream !! - သင်တို့ကိုငါဒူဘိုင်းကိုချစ်! အကြှနျုပျ၏နှလုံးပါကျေးဇူးတင်ကြောင်း !!
ရည်မှန်းချက်ကြီးကြီးထားပါ! ဒူဘိုင်း Dream !! ဒူဘိုင်း, အခွင့်အလမ်း၏မြေ၏မြေ ဂရိတ်ခေါင်းဆောင်များမတူကွဲပြားခြင်း၏, မြေ, ဆန်းသစ်တီထွင်မှု၏စည်းကမ်း, မြေ, စဉ်ဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲမှုမြေ, ပျော်စရာနဲ့ပျော်ရွှင်မှုမြေ၏မြေ, မေတ္တာနှင့်စောင့်ရှောက်မှု၏ငြိမ်းချမ်းရေး, မြေ၏မြေ, တန်းတူရေးပြည်, ကျွန်မအပေါ်သွားနိုင်ပါတယ် ......
သူတို့က "ငါ့စိတ်နှလုံးမရှိတည်ရှိသည်" ဟုပြောပေမယ့်ငါ့အဘို့ "ငါ့ဝိညာဉ်အဲဒီမှာတည်ရှိသည်" ။ ဒူဘိုင်းငါ့ခရီးမမျှော်လင့်ဘဲခဲ့၏အိပ်မက်ကိုမြင်မက်ဘူး။ ဒါဟာငါအလုပ်နှင့်ဝင်ငွေမှလိုအပ်နေဆိုးဆိုးရွားရွားကြီးအချိန်တွင်တစ်ဦးမှော်များကဲ့သို့ဖြစ်ပျက်, ငါ Jumeirah International နှင့်အယ်လ် Ghurair ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကဲ့သို့အလွန်ကြီးစွာသောအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်အရှိဆုံးကံကောင်းခဲ့ပါတယ်, ဒူဘိုင်း၏မြေမှတ်တိုင်နှင့်ထူးခြားချက်။ ငါ သာ. မင်္ဂလာမဖြစ်နိုင်ဘူး။
အဆိုပါမြေယာပျော်ရွှင်မှုကိုသောအရာကိုငါ့အားပြ, မကုန်မှီတိုင်အောင်ရှိသမျှတို့ကိုငါ့အသက်ကိုမှတဆင့်စိတ်ဖိစီးမှု၏အသက်တာကိုစွန့်ခွာပြီးနောက် ငါဒူဘိုင်းတွင်နေထိုင်စတင်။ အဆိုပါမြေသည်ငါ့ကိုမောင်းနှင်မှုငါ၏ phobia ထဲကလာကူညီပေးခဲ့သည်, ငါပိုင်နှင့်မောင်း3ကားများနှင့်အရှိဆုံးကခံစားမယုံကြည်နိုင်ပါ။ ငါဒူဘိုင်းအတွက်အသက်အဘို့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေများကိုဖန်ဆင်းတော်! အသက်တာ၌အကြီးမြတ်ဆုံးလက်ဆောင်တစ်ခုတစ်ခုမှာတစ်သက်တာများအတွက်အံ့သြစရာမိတ်ဆွေများကိုရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ငါကခုနစ်နှစ်နေထိုင်ဖြစ်လိမ့်မည်ကိုသိသူတစ်ဦး6ရက်သတ္တပတ်တာဝန်ကျတဲ့နေရာ, အဲဒီမှာကုန်းပေါ်ရောက်တဲ့အခါ။ ငါ့အသက်ကိုအကြီးအဖို့အကောင်းကနေပြောင်းလဲသွား! Excellent ကမှအကောင်းဆုံး, ဒူဘိုင်းငါ့အလိုရှိသမျှဘဏ္ဍာရေးကတိကဝတ်ကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့နဲ့နေဆဲလေးရယ်အသက်စွန့်ခွာနှင့်ငါ၏အနာဂတျအတှကျကယ်ဖို့ငါ့ကိုကူညီပေးခဲ့သည်။ ငါကပိုကျေးဇူးတင်မဖြစ်နိုင်ပါ။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ကြီးမားသည် ဒူဘိုင်းကိုချစ်တယ် !!
တစ်ခါတစ်ရံဌအီဖေးခက်ခဲများနှင့်ခက်ခဲဆုံးဖြတ်ချက်များယူရန်သင့်အားတွန်း, အဘယ်သူမျှမခြွင်းချက်နှင့်အတူကျွန်မပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တစ်ဦးမိုးသည်းထန်စွာနှင့်ညှိုးငယ်သောစိတ်နှလုံးနှင့်နောက်ကျောကျောအိန္ဒိယ7နှစ်စစ်မှုထမ်းများ၏3နှစ်ကြာဒူဘိုင်းစွန့်ခွာခဲ့ရသည်။ တနေ့မရှိပါ ငါဒူဘိုင်းလွဲချော်ကြပြီမဟုတ်။ တကယ်တော့နေဆဲငါနှင့်အတူအဒူဘိုင်း၏ဥစ်စာရှိခံစားရရန်တစ်ခုလုံးကိုအိမ်ထောင်စုနှင့်အတူပြောင်းရွှေ့။ တောင်မှငါ့အမိုဘိုင်းဟန်းဆက်များဒူဘိုင်းကနေဖြစ်ကြသည်။
ငါကယနေ့ဖြစ်ကြောင်းကိုအရာကိုဒူဘိုင်းမှအစဉ်အမြဲကျေးဇူးတင်တယ်။ ဒူဘိုင်းကိုငါ့အိပ်မက်နှင့်ရူပါရုံကိုအောင်မြင်ရန်ငါ့ကိုကူညီပေးခဲ့တယ် တစ်ဦးသင်တန်းပေးသူ, ဆရာများနှင့်နည်းပြဖြစ်လာ၏ငါ့ကိုပျော်ရွှင်စေသည်သောအိပ်မက်အလုပ်လုပ်ပါ။ 20 ပြီးနောက်ပေါင်းကော်ပိုရိတ်အတွေ့အကြုံနှစ်နှင့်သစ်တစ်ခုစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် afresh စတင် လေ့ကျင့်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအနေနဲ့လွယ်ကူသောခရီးမဟုတ်ခဲ့။ ဒူဘိုင်းဖန်ဆင်းအဆိုပါငွေစုခြင်းမရှိပုံမှန်ဝင်ငွေလည်းမရှိသော်လည်းလုံးဝပေါ်မှာအာရုံစူးစိုက်ခြင်းဖြင့်ငါ၏အဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ကူညီပေးခဲ့တယ်။ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းများစွာသောအသိ Feeling ။ ငါဒူဘိုင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်ပြောနိုင်အောင်ဝမ်းသာတယ်!
ယနေ့တွင်ငါသည်သင်တန်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၏လယ်ပြင်တွင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အဘို့အနယ်ပယ်ကိုသူဖြစ်ကြောင်းကိုအလွန်ဂုဏ်ယူပါတယ် အခုအသစ်ရွေးကောက်တော်မူသောလယ်၌ကလေးလမ်းလျှောက်ဖို့တွားခြင်းမှ။ အခုတော့ရှိသမျှတို့ကိုငါဒူဘိုင်း၏လှပအစွမ်းထက်စွန်ငှက်နဲ့တူနောက်တဖန်ပျံဝဲဟုသတ်မှတ်ပါ၏။ ကျွန်မလက်ရှိ Venture ၏တည်ထောင်သူ Genius 21 တစ်ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းနှင့်ေူပာင်းလဲရေးကိုအကျိုးတူကိုခေါ်ပါ၏, ဘဝတွေကိုရန်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အသွင်ပြောင်းပေးအာရုံစိုက် ငါကိုဖြတ်ပြီးလာမယ့်နေပါတယ်။ ငါသည်ဤထက်မကပိုကျေနပ်စရာအလုပ်ရှိပါတယ် ... ထိခြင်းနှင့် 100 အသက်ရှင်တော်မူသည်ထက်ပိုဖှယျ3နှစ်ပေါင်းနီးပါး 1000 အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကောက်ယူကြသည်။
အပေါ်၌ငါ့အာရုံ ပညာရေးစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ ကြောင်းအဖြစ်အံ့သြဖွယ်လူသားတွေဖန်တီးနိုင်တဲ့တစ်ခုတည်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်လက်ရှိမျိုးဆက်အများဆုံးကလိုအပ်ပါသည်။ ငါအစီအစဉ်များကိုဆောင်ရွက် သင်ကြားရေးများအတွက် 21 မှသားသမီးတို့အဘို့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာထံမှအမျိုးမျိုးသောကျွမ်းကျင်မှုအပေါ်ရဲဘော်အချင်းချင်းသွေးသောက်စိတ်ထား, Non-သင်ကြားရေးဝန်ထမ်းများနှင့်ကျောင်းသားများ, ကိုယ်ပိုင်ခေါင်းဆောင်မှု, သင်ကြားရေးကျွမ်းကျင်မှု, တစ်ဦးအခန်းက္ပမော်ဒယ်အဖြစ်ဆရာများ, Mindpowerst ကော်ပိုရိတ်များနှင့်ပိုပြီးဖို့ကျောင်းပရဝုဏ်ထဲကနေအဆင်သင့်ကျောင်းသားများအဘို့ရာစုကျွမ်းကျင်မှု။
အခုတော့ငါ့ကိုဒူဘိုင်းပြန်ပေးစေခြင်းငှါအဘို့အချိန်ဖြစ်ပါသည် နှင့်ဒါဟာငါဆရာများနှင့်ကျောင်းသားများပညာရေး၏လယ်ပြင်တွင်ဒူဘိုင်းနှင့်အမူအကငျြ့လုပျရုံဆှေးနှေးပှဲနဲ့ဆက်စပ်ခံရဖို့ဆက်လက်ရန်ဆန္ဒရှိကြောင်းယခုပငျငါ့အိပ်မက်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါတိုင်းလူတစ်ဘာမှရရှိနိုင်စွမ်းတဲ့မွေးဖွား Genius ယုံကြည် သူတို့အသက်တာ၌ခငျြနှင့်အိပ်မက်ကြီးကြီးမက်။ သတ္တုတွင်းဒူဘိုင်းနှင့်အတူပြန်ဖြစ်ဖို့စစ်မှန်တဲ့လာမယ့်အဖြစ်အိပ်မက်တွေ, စစ်မှန်တဲ့လာကြဘူးသောကြောင့်,
ငါသည်သင်တို့ကိုဒူဘိုင်းကိုချစ်! အကြှနျုပျ၏နှလုံးပါကျေးဇူးတင်ကြောင်း !!
ဤဆောင်းပါးသည် LinkedIn ကနေဒူဘိုင်းစီးတီး Company ၏နောက်လိုက်တစ်ဦးကရေးသားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြောင်းကျေးဇူးတင်ဖြစ်ပါသည် နောက်လိုက်ကျွန်တော်တို့ကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ဒူဘိုင်းမြှင့်တင်ရန်ကူညီပေးနေကြပါသည်။ LinkedIn ပေါ်မှာငါတို့ကုမ္ပဏီအတိုင်းလိုက်နာပါ။
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီယခုပေးအပ် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အဘို့ကောင်းသောလမ်းညွှန်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘို့အသီးအသီးဘာသာစကားကိုသတင်းအချက်အလက်ကိုထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ဒူဘိုင်းကျွမ်းကျင်သူများ။ ဒါကြောင့်စိတ်ကို၌ဤအတူသင်အခုလမ်းညွှန်များရနိုငျသညျ, အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာအကြံပေးချက်များနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့် သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနှင့်အတူ။